Isikhulu samaphoyisa ezinsolweni zokuvuma imali "yentshontsho" - Ilanga News
Home Izindaba Isikhulu samaphoyisa ezinsolweni zokuvuma imali “yentshontsho”
Semukele u-R130 000 kubamangalelwa
ULt Col Khephu Ndlovu osolwa ngokwamukela intshontsho nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho.
ISITHOMBE INQOLOBANE YELANGA
UDEDELWE ngebheyili ka-R10 000 usigaxamabhande wephoyisa, uLt Col Khephu Ndlovu (50), yiNkantolo kaMantshi yasePinetown ngecala asolwa ngalo lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho nokwamukela intshontsho lika-R130 000 kubamangalelwa ukuze enze icala lombuso libe buthaka.
ULt Col Ndlovu ongumsolwa wesine kwabawu-5 kuleli cala, ubevele kafushane kule nkantolo izolo ngoLwesithathu nomunye asolwa naye, uMnu Lindokuhle Mbonambi, obhekene necala lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho, wukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni nezinhlamvu.
Kuthiwa okumenze wagcina ezikhindini wukuthi usize isihlobo sakhe, okuthiwa siyindodana yenduna yaseZwelibomvu ngaKwaNdengezi, esibhekene necala lokubulala.
Lesi sihlobo sakhe sisolwa ngecala lokubulala uMnu Thulani Nxumalo, owayengusihlalo weCommunity Policing Forum. ULt Col Ndlovu kuthiwa wamukela u-R130 000 ngenhloso yokuyogwazela umphenyi wecala ukuba alicishe.
Kuthiwa nempela uLt Col Ndlovu wayithatha le mali wayinika umphenyi wecala owagcina ebanjiwe, wafike wacula emaphoyiseni ukuthi le nkece yahamba izandla ezingaki isuka kuyise kamsolwa.
ULt Col Ndlovu ungene ebhokisini ezikhululekele nje, egqoke ibhantshi lesudi eli-grey nebhulukwe le-jean.
Ezishwelezela ukuba inkantolo imnike ibheyili, uLt Col Ndlovu uthe uhola imali engango-R26 000, kanti unomndeni awondlayo nezingane eziwu-6, ukhokhela umuzi nemoto.
“Uma inkantolo iqhubeka nokungigcina la, ngeke ngikwazi ukuya emsebenzini, okuzokwenza ngingakwazi ukukhokhela izindleko okubalwa umuzi nemoto.
“Kangiboni ukuthi kungani inkantolo ingenginike ibheyili ngoba ngiyaqala ukuboshwa futhi nekheli lami liqondile lapho ngihlala khona eMontclair.
“Yize nginayo i-passport, kodwa isiphelelwe yisikhathi futhi ngeke ngiyivuselele uma kusaqhubeka icala,” kusho incwadi efungelwe kaLt Col Ndlovu.
IMantshi Correl Language imnike ibheyili ka-R10 000 kwathi uMnu Mbonambi wanikwa eka-R5 000. Bobabili banikwe ibheyili enemibandela ethi bangaphumi ngaphandle kweKwaZulu-Natal bengabikile emaphoyiseni.
Inkantolo ithe kufanele njalo ngoLwesihlanu bayosayina eziteshini eziseduze nabo ngo-07h00 kuya ku-19h00.
Icala lizoqhubeka mhla ka-23 kuMandulo (September) lapho bobawu-5 abasolwa bezogibela ebhokisini.
Previous articleIgiye yangqabashiya intomb’ endala (80) isinda kwi-Covid-19
Next articleSibhekwe ngabomvu isinqumo sePSL